रमेश खरेललाई एक युवकको यस्तो मार्मिक चिठी – एकचोटी अवस्य पढ्नुहोस ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > रमेश खरेललाई एक युवकको यस्तो मार्मिक चिठी – एकचोटी अवस्य पढ्नुहोस !
रमेश खरेललाई एक युवकको यस्तो मार्मिक चिठी – एकचोटी अवस्य पढ्नुहोस !
–मीन बहादुर पण्डित:सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि अर्का दावेदार रमेश खरेलले राजीनामा गरेको कुराले यति बेला नेपाली राजनीतिक बजार तातेको छ । स्वच्छ र हक्की छबि बनाएका अनि कडा स्वभाव भएका रमेश खरेल धेरै जनता माझ सेलिब्रिटी जस्तै छन् । प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात आइजीपीको पद पनि एउटा दौड जस्तै रहेछ । त्यसैले दौडमा एकजना पहिलो हुन्छ, अनि अर्को क्रमशः दोश्रो र तेश्रो हुनु स्वभाविकै हो ।पाल पुलिसलाइ सधै एक नम्बरमा हुने गरि दौडाउन तपाईंको पनि सहयोग, समर्थन, सल्लाह र सदभाव चाहिन्छ । प्रहरी संगठन यस्तो संगठन हो, जसमा पहिलो हुनेलाई दोश्रो हुने
देखि लास्ट हुनेसम्म र दौडमा भाग नै नलिएकाहरूको पनि सहयोग र सदभाव चाहिन्छ ।फेरि एक सेकेन्डले वा अलिकता बढी नम्बरले पहिलो हुने र दोश्रो हुनेमा खासै ठूलो भिन्नता हुँदैन । पहिलो हुनेले अलि बढ्ता अधिकार, तलब, सुबिधा, र इज्जत पाउला कुरा त्यत्ति हो । तर, पहिलो हुनेलाइ मात्र सधै दौडाइ रह्यो भने थाकेर, दोश्रो वा तेश्रो हुनेले पनि कुनै दिन पहिलो हुनेलाई सजिलै जित्न सक्छ । किनकी, यो एउटै व्यक्ति मात्र दौडी रहने कुरा होइन । त्यसैले नेपाल पुलिसलाइ सधै एक नम्बरमा हुने गरि दौडाउन तपाईंको पनि सहयोग, समर्थन, सल्लाह र सदभाव चाहिन्छ । प्रहरी संगठन यस्तो संगठन हो, जसमा पहिलो हुनेलाई दोश्रो हुने देखि लास्ट हुनेसम्म र दौडमा भाग नै नलिएकाहरूको पनि सहयोग र सदभाव चाहिन्छ ।
शान्ति सुरक्षा र जनताको जिउ धनको रक्षा गर्ने कुरामा गौरवपूूर्ण इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीको महत्व र भूमिका कहिले पनि घट्ने छैन । बरु समय अनुसार यसलाई अझ सवल, आधुनिक र जनअपेक्षा अनुसार अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । गाउँदेखि सहरसम्म शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, लागूऔषध कारोबार रोक्ने, अपराधिहरुलाई खोजेर अदालतमा बुझाउने, चोरी सिकारीलाइ नियन्त्रण गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई सुरक्षा दिने, निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा दिने, मठ मन्दिर आदि राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा गर्ने, सरकारी कार्यालयहरुको सुरक्षा गर्ने देखि लिएर विदेशमा शान्ति स्थापना तथा अनुगमनमा समेत नेपाल प्रहरीको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको संगठनमा तीब्र प्रतिष्पर्धा हुनु त स्वभाविक र खुसीकै कुरा हो ।
सरकारको पनि मूल्यांकन गर्ने आफ्नै तरिका र आधार होलान, अनि सरकारको पनि नियमभित्र बाधिनु पर्ने आफ्नै बध्यता होलान । यस अर्थमा तपाईंलाई नियुक्ति नगरेर सरकारले अपमानित गर्यो भन्ने अर्थ लाग्दैन वा लगाउनु हुँदैन ।
हरेक व्यक्तिको मूल्यांकन गर्ने क्षमता र तरिका अलग अलग हुन सक्छ । सरकारको पनि मूल्यांकन गर्ने आफ्नै तरिका र आधार होलान, अनि सरकारको पनि नियमभित्र बाधिनु पर्ने आफ्नै बध्यता होलान । यस अर्थमा तपाईंलाई नियुक्ति नगरेर सरकारले अपमानित गर्यो भन्ने अर्थ लाग्दैन वा लगाउनु हुँदैन । तर, मुख्य कुरा यो पालि सरकारको निर्णय चित्त नबुझेर अदालत जाने वातावरण बनेन । अनि हामीले बुझेको यो पालि आइजीपी नियुक्तिमा आर्थिक र राजनीतिक चलखेल भएन । यसलाई सबै भन्दा राम्रो र सकारात्मक मान्नु पर्दछ ।
अर्को कुरा २ जना ख्यातिप्राप्त कलाकारले गीत गाउँदा पनि कुनै गीत कुनै कलाकारले राम्रो गाउला, कुनै गीत कुनै कलाकारले राम्रो गाउला । अनि कसैलाई कुनै कलाकारले गाएको गीत मन पर्ला, कसैलाई कुनैले । अनि त्यसमा पनि जज अनुसारको मूल्यांकन होला । एउटै बिद्यार्थीको कापी २ जना फरक फरक शिक्षकले जाँच्दा नम्बर दिने अलग शैलीले गर्दा कहिले को पहिलो हुन सक्छ, भने कहिले को पहिलो हुन सक्छ । त्यसैले योगदान गर्न नम्बर एक नै हुनु पर्छ भन्ने छैन । तर, आफूलाई लागेको र आफूले चाहेको परिवर्तन गर्न भने नपाइन सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा भने रमेश खरेलले राजीनामा बारे सोच्नु पर्ने हुन् सक्छ । तर, जन चाहना भनेको सकभर मिलेर प्रहरी प्रशासनलाई बलियो, सुदृढ, विश्वस्त र प्रभावकारी बनाउन् भन्ने नै छ । जनताको नजरमा दुबै व्यक्ति नम्बर वान नै छन् । त्यसैले एक जना आइजीपी भए भनेर अर्कोले अपमानित महसुस गर्नु हुँदैन । जिन्दगिको दौडमा कहिले को प्रथम हुन्छ त कहिले को? जो भए पनि सल्लाह, समर्थन र सहयोग गरौँ । देश र जनताको भलो हुने बाटो पनि यहि नै हो ।
एउटै बिउ अनि एउटै बारीमा रोपेको मैकैको बोट पनि कोही अग्लो हुन्छ, कोही अलि होचो हुन्छ, कुनैमा अलि ठूलो घोगा लाग्छ भने कुनैमा अलि सानो घोगा लाग्छ । त्यसैले समानता कहीँ पनि हुँदैन ।
अर्को कुरा कुनै पनि आमाले त आफ्ना दुबै छोराको उत्तिकै माया भए पनि, अनि छोराहरु पनि उत्तिकै ट्यालेन्ट भए पनि, दुबैलाई राजा बनाउन सक्दिनन् । किनकि राजा त एउटै व्यक्ति मात्र हुने हो । अदालतमा एउटै केसको पनि वकिल अनुसारको फरक बहस हुन्छ, अनि एउटै केसमा पनि न्यायाधीश अनुसारको अलग अलग फैसला आउँछ । एउटै बिउ अनि एउटै बारीमा रोपेको मैकैको बोट पनि कोही अग्लो हुन्छ, कोही अलि होचो हुन्छ, कुनैमा अलि ठूलो घोगा लाग्छ भने कुनैमा अलि सानो घोगा लाग्छ । त्यसैले समानता कहीँ पनि हुँदैन । मौसम पनि सधै एकै किसिमको हुदैन । त्यसैले सधैभरि असार मै बर्खा सुरु हुन्छ भन्ने हुँदैन, कहिले जेष्ठमै पानी पर्न सुरु हुन्छ त कहिले साउन लागे पछि मात्र पानी पर्न सुरु हुन्छ । स्कुलमा पनि पहिलो हुन सकिएन भनेर स्कुल नै छोड्ने कुरा हुँदैन । चुनावमा हारियो भने पनि राजनीति छोड्ने कुरा हुँदैन । जो जति नम्बरमा भए पनि देश र जनताको सेवा गर्न सबैले आ–आफ्नै ठाउँबाट योगदान गरौँ । यसो गर्दा भोलि तपाईं रिटायर्ड भए पछि पनि अरु क्षेत्रमा स्तापित हुने आधार बन्ने छ ।
त्यति बेला पनि वामदेव गौतमले रमेश खरेललाइ काठमाण्डौँ प्रहरी प्रमुख बाट हटाएर सरुवा गर्दा बबाल भएको थियो । जनस्तरबाट जसको खुब आलोचना पनि भएको थियो । त्यसैले गर्दा उप चुनावमा काठमाण्डौबाट एमालेले हारेको हामीले बिर्सेका छैनौँ । देशैभरी बाम गठबन्धनको करिब दुई तिहाइ बहुमत आउँदा पनि वामदेवले किन चुनाव हारे त भन्दा रमेश खरेललाई २ नम्बरमा पार्नाले, अनि काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख बाट नियम मिचेर हटाउनाले पनि हो (नत्र खरेल ६ महिना पहिले जागिर खाएका सिनीयर नै रहेछन्) शेर बहादुर देउवा सरकारले पनि बढुवाको क्रममा २ नम्बरमा पारेको रहेछ । एक लाई दुई र दुईलाई एक बनाउन सक्नेले देशलाई चाहीँ लास्ट नम्बर बनाए । चाहे जसले गरोस, गल्ती त गल्ती हो , गल्ती गर्नेलाई जनताले त्यसै छाडदैनन् ।
रमेश खरेललाई आइजीपीको रुपमा देख्न्न चाहनेहरु धेरै छन, त्यसैले यती बेला उनि मात्र होइन उनका प्रशंसक पनि दुःखी भएका छन् । त्यहाँसम्म पुग्नु पनि गर्व कै कुरा हो ।
गल्ती र वास्तविकता लुकाउन खोजियो भने कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन, बरु ठूलो घाटा हुन सक्छ । तर गल्तिबाट पाठ सिक्दै आत्माआलोचना गरेर अगाडी बढ्ने हो भने मात्र सफलता पाइन्छ । रमेश खरेललाई आइजीपीको रुपमा देख्न्न चाहनेहरु धेरै छन, त्यसैले यती बेला उनि मात्र होइन उनका प्रशंसक पनि दुःखी भएका छन् । त्यहाँसम्म पुग्नु पनि गर्व कै कुरा हो । यत्रो ठूलो संगठनमा २ नम्बरमा पुग्नु पनि चानचुने कुरा होइन । फेरी ‘फस्ट इज एब्री थिङ्ग्स, एण्ड सेकेन्ड इज नथिङ्ग’ पनि त होइन नि । अनि आज सेकेन्ड भएको व्यक्ति भोली फेरी फस्ट हुन सक्दैन भन्ने पनि त होइन ।
अब राजीनामा गरिसकेपछि नवराज सिलवाल जस्तै नेपाली राजनीतिमा आउनु पर्दछ, किन भने यत्तिको जागुरक व्यक्ति निस्कृय बस्नु उपयुक्त हुँदैन । जहाँ रहे पनि याँहाको आगामी दिन शुभ रहोस् ।
पहिलो हुन पाइन भनेर राजीनामा गर्दा पनि जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन, अनि पहिलो हुन पाइन भनेर राजीनामा गर्दा अलि सुहाउदैन, वा तपाईं जस्तो व्यक्तिलाई शोभा दिदैंन । अब राजीनामा गरिसकेपछि नवराज सिलवाल जस्तै नेपाली राजनीतिमा आउनु पर्दछ, किन भने यत्तिको जागुरक व्यक्ति निस्कृय बस्नु उपयुक्त हुँदैन । जहाँ रहे पनि याँहाको आगामी दिन शुभ रहोस् ।
यो वर्ष नेपाली चलचित्रको चर्चित काण्डहरु – हेर्नुहोस फोटो सहित
पर्यटन मन्त्री आलेको अर्को चमत्कारः विमानस्थलका कर्मचारी कु ट्ने सिइओलाई गरे निलम्बन
दु:ख पाउनुछ वा धोका खानु छ भने एमालेमा गए हुन्छ, बल्ल बुझ्दैछु एमाले कस्तो छ-कोमल वली